အချိန် အခက်အခဲအရ ပြည်သူ့ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များကို အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်ပုံစံဖြင့် ရွေးခ?? - Yangon Media Group
ညီလာခံကျင်းပရန် အချိန်မရှိတော့သည့်အတွက် ပါတီဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကို အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်မှတက်လာသည့်ပုံစံဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြည်သူ့ပါတီ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ဦးရဲနိုင်အောင်က ပြောသည်။ ဦးကိုကိုကြီးဦးဆောင်သည့် ယင်းပါတီကို ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က သြဂုတ်၂၄ ရက်တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်စာရင်းကို ပါတီဝင်အင်အား ၁ဝဝဝ စာရင်းနှင့်အတူ ရက်ပေါင်း ၉ဝ အတွင်း ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ကအခုမှ ပါတီစထောင်တာလေ။ စထောင်တာဆို တော့ ပါတီညီလာခံခေါ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်အများကြီးယူရဦးမယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အောက် ခြေကနေ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်တဲ့ဟာတော့ မလုပ်ဘူး။ ဒါတော့ ကျွန် တော်ပြောနိုင်တယ်။ သို့သော် ဘယ် လိုပုံစံရွေးပြီး ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှပဲ မီဒီယာကနေတစ်ဆင့် ပြည်သူကိုအသိပေးမယ်”ဟု ဦးရဲနိုင်အောင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ သြဂုတ် ၂၈ ရက်တွင် ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ပါတီဝင် အင်အားတင်ပြရန် စိစစ်လျက်ရှိပြီး ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် စာရင်းနှင့်အတူ ရက်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးရဲနိုင် အောင်ကပြောသည်။
”အကြမ်းဖျင်းပြောနိုင်တာက တော့ ရက်ကိုးဆယ်ထိတော့ ကျွန် တော်တို့အချိန်မယူဘူး။ အချိန်အတိ အကျပြောဖို့ခက်ပေမယ့် အကြမ်းဖျင်း ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ရဲ့ အောက်မှာပဲ မြန်အောင်ဆောင် ရွက်သွားမှာပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ပါတီဝင်စာရင်း တင်ပြရာတွင်လည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ငြိစွန်းမှုများရှိလာပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အနေဖြင့် အင်အား ၁ဝဝဝ ထက်ပိုမိုသည့်စာရင်းကို တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ပြည်သူ့ပါတီ၏ အခြေခံမူဝါဒမှာ တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်ပါတီများနှင့် မဟာမိတ်ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည် ထောင်ရေးကို အဓိကဦးတည်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးရဲနိုင်အောင်က ပြောသည်။
ပြည်သူ့ပါတီသည် မှတ်ပုံတင် စလျှောက်စဉ်က ရှစ်လေးလုံးပါတီ ဟူသောအမည်ဖြင့် လျှောက်ထားခဲ့ သော်လည်း ကန့်ကွက်မှုများရှိခဲ့သဖြင့် ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ပါတီဟူ သောအမည်ဖြင့် ထပ်မံလျှောက်ခဲ့သည်။ ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ပါတီအမည်ကိုလည်း ကန့်ကွက်မှုများရှိနေ သေးသဖြင့် ပြည်သူ့ပါတီဟူသည့်အမည်ဖြင့် ဇူလိုင် ၉ ရက်တွင် ထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့ရာ သြဂုတ် ၂၃ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မဲဆောက်မြို့ရှိ စက်ရုံတစ်ရုံမှ မြန်မာ အလုပ်သမား ၈ဝ အကြောင်းမဲ့ အလုပ်ဖြုတ်ခံရသဖြင့် ပိုင်ရ??
အစိုးရကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီနိုင်ရေး ၈၈ မျိုးဆက်(ငြိမ်း/ပွင့် ) မကြာမီ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်
ထိုင်းအစိုးရ ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများ၏ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပစ္စည်းများ တင်ပြခွင့် ရက်တို
မြန်မာ့ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့် ရရှိရေး နှစ်ဖက်တာဝန်ရ?